फिल्म हलमा नेता होइन, दर्शक चाहिन्छ
काठमाडौं –आफ्नो फिल्म हेर्न ‘विशेष शो’ भन्दै हलमा नेतादेखि कलाकार बोलाउनु नेपालमा नौलो रहेन् । चलेका नेता तथा कलाकारले फिल्म हेरेर त्यसका बारे दुई–चार शब्द राम्रो बोलिदिँदा दर्शक हलसम्म तानिन्छन् भन्ने सोच आम फिल्मकर्मीको छ ।
फिल्म राम्रो भएको खण्डमा केही हदसम्म यो कुरा सही पनि हो, तर नेपालमा हलमा दर्शक नआएपछि मात्र नेता तथा कलाकारलाई बोलाउने प्रचलन व्याप्त छ । फिल्म प्रदर्शनमा आउँछ, हलमा दर्शक आउँदैनन्, अनि शुरू हुन्छ चलेका नेता तथा कलाकारलाई फिल्म हेर्न बोलाउने क्रम ।
नेता पनि फिल्मकर्मीको आग्रहमा हलसम्म पुग्छन्, फिल्म हेर्छन् र फिल्मका बारे दुई–चार शब्द बोल्छन् । तर विडम्बना ! नेपालमा चलेका नेता तथा कलाकारले हेरेका र तारिफ गरेका अधिकांश फिल्मले सुःखद् व्यापार गरेका छैनन् । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने हलमा नेता र चलेका कलाकार जाँदैमा दर्शक आउँदैनन् ।
उदाहरणका लागि केही महिना अगाडि फर्कौं ।
गत असोजमा ऋषि धमलाको फिल्म ‘अनुराग’ प्रदर्शनमा आयो । आफ्नै श्रीमती एलिजा गौतम नायिका बनेको फिल्म ‘अनुराग’ हेर्न ऋषिले चलेका नेतादेखि कलाकार हलमा लाइन लगाइदिए । नेता र कलाकारसँग चिरपरिचित ऋषिले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासम्मलाई हलसम्म लगेर फिल्म देखाए ।
चलेका कलाकारहरू समेत ऋषिको आग्रह स्वीकार्दै हलसम्म पुगेर ‘अनुराग’ हेरे । उनीहरूले मिडियासामु फिल्म राम्रो बनेको बताउँदै दर्शकलाई फिल्म हेर्न पनि आग्रह गरे । तर के गर्नु, नेता र कलाकार दिनैपिच्छे हलमा पुगेर फिल्म हेर्दा दर्शकले भने फिल्म हेर्न रुचाएनन् । अन्नतः फिल्म केही दिनमा हलबाट उत्रियो । अनुरागले लगानी समेत सुरक्षित गर्न सकेन् ।
त्यस्तै, जाऔं रेखा थापाको फिल्म ‘मालिका’तर्फ । कात्तिक १६ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको ‘मालिका’ हेर्न नेतादेखि महिला अधिकारकर्मी र कलाकारहरूको लाइन नै लाग्यो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, नायिका करिश्मा मानन्धर लगायतले मालिका हेरे अनि दर्शकलाई पनि फिल्म हेर्न सुझाए । तर रेखाको यो फिल्म पनि व्यवसायिक रूपमा असफल भयो ।
अब कुरा गरौं, मात्र १० दिन अगाडिको ।
माघ १८ गतेबाट तीन नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आए । यी फिल्म हेर्न पनि नेतादेखि कलाकारहरूको लाइन लाग्यो ।
गाईपालक किसानको कथामा बनेको फिल्म ‘गोपी’ हेर्न श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट, एमाले नेता योगेश भट्टराई, पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत, नेत्री नविना लामा लगायत हलसम्म पुगे ।
उनीहरूले फिल्म राम्रो बनेको बताउँदै दर्शकलाई पनि फिल्म हेर्न मिडियामार्फत् आग्रह गरे । तर दर्शक हलसम्म तानिएनन् र फिल्मले सुःखद् व्यापार गर्न सकेन् ।
त्यस्तै भ्रष्टाचारको कथामा बनेको ‘सय कडा १०’ हेर्न सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितदेखि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरे, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायत हल पुगे । उनीहरूले फिल्म प्रत्येक युवाले हेर्नुपर्ने बताए । तर यो फिल्म हेर्न पनि दर्शकले चासो देखाएनन् ।
यी चलचित्र दोस्रो सातामा प्रदर्शनरत छन् । तर हलमा दर्शकको संख्या हेर्ने हो भने बिजोग देखिन्छ ।
चलचित्रले सुःखद् व्यापार नगरेपछि निर्माता तथा निर्देशकहरू चिन्तित देखिएका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन्– आखिर फिल्म किन चलेन् ? दर्शकहरू कहाँ गए ?
केही अर्थमा अपेक्षा गरिएका चलचित्रले सुःखद् व्यापार नगरेपछि दर्शक हराए भनिनु स्वभाविक पनि थियो । तर नेपाली फिल्मका दर्शक हराएका होइनन्, उनीहरू बिच्किएका हुन् । बर्सेनि सयको संख्यामा फिल्म बनिरहेका हुन्छन्।
त्यसमा २० प्रतिशत फिल्म पनि औसत बन्दैनन् । दर्शकहरू एउटा आशा बोकेर फिल्म हेर्न जान्छन्, तर फिल्मले दर्शकलाई निराश बनाउँछ । त्यसपछि प्रदर्शनमा आएका राम्रा फिल्म त्यसैको मारमा पर्छन् । राम्रा फिल्मभन्दा नराम्रा फिल्मको बाढी आउँदा दर्शकहरू फिल्मप्रति आकर्षित हुन छाडेका छन् ।
त्यसो त अधिकांश राम्रा फिल्मले दर्शक पाएका पनि छन् ।
२० वर्षदेखि रंग पत्रकारिता गर्दै आएका डब्बु क्षेत्री नेता तथा कलाकारलाई फिल्म देखाउँदा केही मात्रामा पब्लिसिटी हुने गरेपनि अहिले दर्शकहरू निकै बाठा बनिसकेको बताउँछन् । ‘दर्शकहरूले फिल्म घोषणादेखि नै फिल्म कुन व्यानरबाट बनिरहेको छ, कलाकार को–को छन् भनेर वाच गरिरहेका हुन्छन् । दर्शकहरू निकै बाठा बनिसकेका छन् ।’
विशेष शो तथा प्रिमियरमा नेता तथा कलाकारले फिल्मका बारे राम्रो भनिदिनु उनीहरूको बाध्यता रहेको डब्बु बताउँछन् । कहिलेकहीँ नराम्रो फिल्म आइरहेको समयमा राम्रो फिल्म आउँदा दर्शक झुक्किने गरेको पनि उनको बुझाइ छ । यद्यपि कथा, कलाकार, गीत संगीत, प्रचारप्रसार राम्रो भयो भने अपवाद बाहेकका फिल्म अवश्य चल्ने उनको बुझाइ छ ।
अहिलेसम्म अभ्यास हेर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने– नेता तथा चर्चित कलाकारलाई हलसम्म लगेमा दर्शक आउँछन् भन्नु फिल्मकर्मीको मुर्खता हो । नेता तथा कलाकारको बाध्यता हुन्छ, फिल्म हेर्ने निमन्त्रणा आएपछि फिल्म हेरेर त्यसको तारिफ गरिदिनु । नेताले बोल्दैमा मात्र दर्शक आउने होइनन् ।
वास्तवमा फिल्म चल्न नेता तथा कलाकारहरूको तारिफ होइन, फिल्म नै गलितो हुनुपर्छ । फिल्मको कथा दर्शकको मनमा बस्ने हुनुपर्छ ।
फिल्मको प्रचारप्रसार प्रभावकारी हुनुपर्छ । फिल्मले गतिलो व्यापार गर्न हलमा नेता होइन, दर्शक नै चाहिन्छ ।